Indlu yamatye eOzón, eMuxía - I-Airbnb
Indlu yamatye eOzón, eMuxía
Ozón, Galicia, Spain
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguJuan Carlos
UJuan Carlos yi-Superhost
Yindlu yamatye enemigangatho emibini epholileyo ehlala kwilali encinci, imizuzu eyi-8 ngemoto esuka eMuxía kunye nemizuzu emi-2 ukusuka elunxwemeni lwaseLago. Isanda kulungiswa, kunye nabo bonke ubutofotofo kunye nefenitshala entsha, ngaphezu kokuba ne-thermal insulation. Inamagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlambela phezulu; kunye nekhitshi, igumbi lokuhlambela kunye negumbi lokuhlala kumgangatho ophantsi.
Ilungele naliphi na ixesha lonyaka; Akutshisi ehlotyeni, kwaye ebusika kuba nesitovu seenkuni esifudumeza indlu yonke.
Yindlu emalunga ne-60 square metres ebekwe kwidolophana encinci kwidolophu yaseMuxía, apho kukho iilwandle ezimangalisayo ezineempawu ezahlukeneyo, zombini zilungele iintsapho kunye nokusefa (Nemiña). Ikwakwindawo ebizwa ngokuba yiCosta da Morte, ebalaseleyo ngeendawo zayo ezingenakuthelekiswa nanto. Ezinye zezinto ezimele zibonwe yiFinisterre Lighthouse yodumo, leyo amaRoma ayibiza ngokuba sisiphelo somhlaba. Kukwakho ne-Ézaro Waterfall, ulwandle lwaseCarnota (elona lukhulu eGalicia), kunye needolophu ezingaqhelekanga ezifana neCamariñas, Corcubión ...
Sathetha ezahlukeneyo izinto ezinokwenziwa kule ndawo: uhambo Kayak kufuphi Waterfall, nasemkhenkceni jet, izifundo surf, iintlobo nokuhamba kweendlela (i Ruta dos Faros ivelele), iindlela ibhayisekile (Gran Fondo Ézaro).
Yiyo loo nto sikumema ukuba uzonwabele iiholide zakho kwindawo engekafunyanwa. Awuyi kuzisola!
I-Ozón yilali ezolileyo kakhulu, apho unokuqhawuka kubomi basezidolophini.
Umbuki zindwendwe ngu- Juan Carlos
Ingqwalasela esisigxina apha 666 858 103, okanye i-imeyile jlemafigueroa@gmail.com
Inombolo yomthetho: VUT-CO-003885
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ozón